पुरुषसँग मेरो पहिलो रात ! जब उसले मलाइ कसेर समात्यो…त्यसपछि खै के भयो ? - Samachar Post Dainik
तसलिमा नसरिन- मयमनसिंहमा प्राइभेट कोठा नपाइए पनि ढाकामा पाइन्छ भनेर रुद्र भनिरहन्थ्यो　। तर, म कसरी ढाका जान सक्थेँ र ! रेलमा चढेर एक्लै जान त सक्थेँ होला, तर घरबाट अनुमति देलान् र ! अन्त्यमा सान्दाइ मयमनसिंह आएका वेला ढाका जान जिद्दी गरेँ　।
‘पहिलो वर्षको जाँच पास गरेको प्रमाणपत्र लिन ढाका जान्छु,’ भनेँ　। ढाका पुग्नेबित्तिकै ‘एकजना साथीलाई ढाका विश्वविद्यालयको होस्टेलमा भेट्न जान्छु’ भन्दै सान्दाइको कोठाबाट हिँडेँ　।
र, सीधै रुद्रको कोठा गएँ। तर, रुद्र खुसी भएन। खुसीमा उफ्रिनु वा पीडामा आँसु झार्नु रुद्रका लागि असम्भवप्रायः थियो ।
शिरदेखि पाउसम्म ऊ रूखको ठुटोजस्तै थियो　। ऊ आफ्ना अनुभूति बाहिर देखाउँदैनथ्यो　। रुद्रले मलाई साडी लगाउन दियो　।
सेतो साडीमा स–साना फूलका बुट्टा थिए　। पेटीकोट र ब्लाउज पनि साडीसँग मिल्ने थिए　। रुद्रकी बहिनी विठीले छानेकी थिई यो साडी　। रुद्र आफैँले मलाई साडी छानेर कहिल्यै दिएको थिएन　।
पहिले उसले दिएको हरियो सुती साडी पनि उसकी साथी मुक्तिलाई छान्न लगाएको थियो　।
मचाहिँ रुद्रलाई जन्मदिनमा दिने उपहार आफैँ छानेर किन्थेँ　। कुन रङको सर्टसँग कुन रङको पेन्ट मिल्छ, म आफैँ छान्थेँ　। अरूलाई साडी छान्न लगाउँदा रुद्र मेरो रूपरंगबारेमा भन्ने गर्थ्यो, अलि कालीखालको केटीलाई जुन सुहाउँछ, त्यही　।’
रुद्रले मुक्ति र विठी दुवैलाई हाम्रो गुप्त बिहेबारेमा भनेको रहेछ　।
त्यो रात उसले मलाई चाइनिज रेस्टुरेन्ट लिएर गयो। खाना खाएर हामी फर्कियौँ। मैले हाम्रो बिहेबारेमा कसैलाई बताएकी थिइनँ　। रुद्रचाहिँ बिस्तारै सबै मान्छेलाई बताउन थालिसकेको थियो　।
त्यो रात मैले रुद्रकोमा बस्नुपर्ने भयो　। तर, मैले जानुपर्ने थियो　। सान्दाइलाई एक घन्टामा आउँछु भनेर हिँडेकी थिएँ　। सान्दाइकोमा जान खोज्दा रुद्रले भन्यो, दाइकोमा जाने कुरा नगर　। तिमी मेरी श्रीमती हौ　। यही नै तिम्रो सबभन्दा ठूलो परिचय हो　।’
‘तर, यो परिचयले म अहिले बाँचेको जिन्दगी बाँच्न सक्दिनँ　।’ ‘तिमी अवश्य सक्छौ　।’ ‘तर, मैले सान्दाइलाई आफू झुनू सानिमाकोमा थिएँ भनेर झुट बोल्नुपर्छ　।’ ‘त्यसो भए पीर नगर　।
म झुनू सानिमालाई कुरो मिलाउन आग्रह गर्छु　।’
‘तर, सानिमा माल्लिन् र ?’ ‘किन नमान्नु र मैले सकेको गर्छु　।’ त्यो रात मैले रुद्रसँग बिताउनै पर्ने भयो　। यो रुद्रको माग, आदेश, आग्रह, इच्छा, सबै थियो　।
रुद्रले भन्यो, ‘आज तिमी मलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिन्छ　।’ ‘सम्पूर्ण भन्नाले।’ ‘‘सम्पूर्ण भनेको सम्पूर्ण　। पछिका लागि केही बाँकी नराखी ।’ यसको अर्थ बुझेर मेरो मुटु हल्लियो　।
मैले गलत गरिरहेको छैन भनेर आफूलाई आश्वस्त पार्न खोजेँ　। वैधानिक रूपमै म आफ्नो लोग्नेसँग रात बिताउन गइरहेकी थिएँ　।
मेरै उमेरकी हसिना त त्यसो गर्न सक्छे भने मचाहिँ किन सक्दिनँ त ? मेरै कक्षाकी मन्दिराले पनि सहपाठी सौकतसँग गोप्य बिहे गरेकी थिई　।
ऊ पनि सौकतको कोठामा गएर रात बिताउँछे भन्ने हल्ला चलेको थियो　। अन्त्यमा त्यो रात आयो　। रुद्रले मलाई उसको कोठामा लग्यो　।
सर्ट, पाइन्ट खोलेर लुंगी मात्रै बेर्‍यो र बत्ती निभायो　। त्यसपछि मलाई बोकेर ओछयानमा लगेर पल्टायो　। म मनमनै भनिरहेकी थिएँ, ‘अब तेरो बिहे भइसक्यो　। बिहेपछि लोग्नेसँग सुत्नुपर्छ　।
तैँले सुत्नैपर्छ　। सबै केटीको नियति यही हो　।’ सडक–बत्तीको उज्यालो झयालबाट भित्र पसिरहेको थियो　।
मलाई त्यो उज्यालो चन्द्रमाको प्रकाशजस्तो लाग्यो　। म रुद्रलाई माया गर्थें　। ऊ मेरो लोग्ने थियो　। रुद्रतिर ढाड फर्काएर एकैपोको परेर पल्टिएँ म　। मेरो गुडुल्किएको शरीरलाई रुद्रले आफूतिर तान्यो　।
म होइन, खाली मेरो प्राणविहीन शरीरमात्र रुद्रको अँगालोमा बेरियो　। मेरा हात छातीमा लपक्कै टाँसिए। रुद्रले निकै बल गरेर छातीबाट मेरो हात हटायो　।
म काँपिरहेकी थिएँ　। रुदले मेरो ओठमा गहिरो चुम्बन गर्‍यो　। मेरो ओठ बाक्लो र गह्रौँ भएजस्तो लाग्यो　।
नचाहँदा–नचाहँदै पनि म रुद्रलाई जोडजोडले धकेलिरहेको थिएँ　। रुद्रले एक हातले मेरो ब्लाउजको टाँक खोल्यो　।
उसको ओसिलो जिब्रो मेरो छातीमा चलमलाउन थाल्यो　। अस्तव्यस्त साडीमा अल्भिएर म उसको अँगालोमा निस्सासिरहेँ　। ‘हेर केटी, आफ्नो लोग्नेले भनेअनुसार गर　। खुट्टा फाडेर राख　।
यही नै त हो तरिका ’ मैले आफूलाई बारम्बार यसो भनिरहेँ　। त्यसपछि मैले पूरै शरीर छाडिदिएँ　। आँखा चिम्लँदै म आफू त्यहाँ नभएको परिकल्पना गरेँ　। ‘
यो मेरो शरीर होइन　। यहाँ जे–जस्तो अश्लील काम भइरहेको छ, त्यसमा म पटक्कै संलग्न छैन। यो म होइन। यो अरू कसैको शरीर हो,’ म यस्तै–यस्तै सोचिरहेकी थिएँ　।
प्रत्येकपटक मेरो चित्कारलाई रोक्न रुद्रले मेरो मुख थुन्नु पर्‍यो　। जब यो कहालिलाग्दो रात सकियो, थकित मैले साडी फेरेर कुर्ता–सुरुवाल लगाउँदै भनेँ, ‘म जान्छु　।’ मुन्टो निहुर्‍याउँदै आँखा झुकाउँदै मेरो बेकामे शरीर लिएर म टाढा जान चाहन्थेँ　। रातको डर, लाज र घिनले बिहान पनि मलाई छाडेन　।
अपराधबोध पनि भयो मलाई　। रुद्र मलाई ‘रुद्र’ जस्तै लाग्यो　।
मेरो लोग्नेजस्तो कति पनि लागेन　। घर छिर्ने वेला बाटोमा उसले भन्यो, ‘राति नाटक नगरेकी भए राम्रो हुन्थ्यो　।’ त्यसबाहेक उसले केही भनेन　।
न त मैले नै केही भनेँ　। म रातिको घटनालाई सम्भिएर चुपचाप बसेँ　। त्यो सबको साटो बरु रातभरि पढेर, गफ गरेर, कविता वाचन गरेर वा निश्चल चुम्
प्रकाशित मिति २० बैशाख २०७८, सोमबार २३:३०